Mawduucu Ma Beddeli Doono Wicitaan-Ficil La'aan | Martech Zone
Mawduucu Ma Beddeli Doono Wicitaan-Ficil la'aan
Jimco, Juun 14, 2013 Jimco, Juun 14, 2013 Douglas Karr
Bil kasta Martech Zone waxay abuuri doontaa gacan mug leh oo horseed ah kafaalasho, xayeysiin iyo la-talin fursadaha. Maaddaama goobta ay sii kordheyso caan ka noqoshada, in kastoo, ma aanan arkin koror ku xiga hoggaamiyeyaasha. Ugu dambayntii waan haystay - Waan falanqeeyay goobta oo waxaan dib u eegay halka wicitaannadeennii-ficilladuba ay ahaayeen guud ahaan. Waa wax aan ahmiyad gaar ah siinno macaamiisheenna laakiin waxaan ku guuldareystay inaan dib u eegno istiraatiijiyaddeenna u gaarka ah ee ku habboon-wacitaan-ficillada.
Waxaa jira 3 meeleyn caadi ah oo loogu talagalay wicitaanadaada-waxqabad ee bog kasta oo ka mid ah boggaaga:
In-Stream - kani waa CTA-ga ugu xoogan, oo dhigaya iskuxiraha, badhanka, ama sawirka laxiriira nuxurkaaga wuxuu badali doonaa kuwa xiiseynaya ee akhrisanaya waxyaabaha aad wadaagtay.
Dhexdhexaadiye - waxaad dareemi doontaa xoogaa firfircoon oo joogto ah oo CTAs ah oo ku dhow mawduucayaga. Waxaan hubinay inay kudhawaadaan aqristayaasheena RSS, barta mobilka iyo codsiyada moobiilka, sidoo kale.
Site - kuwani waa CTA-yada guud ee gaarka u ah alaabada iyo adeegyada ay meheradaadu bixiso. Maaddaama dadku sii wadaan inay akhriyaan waxyaabaha aad ka kooban tahay, qaar badan ayaa xiiseyn doona sida aad uga caawin karto iyaga u adeegidda C goobaha ballaadhan ee CTA-yada sida xayeysiisyada cinwaanka iyo kuwa hoose.
Marka laga reebo, dabcan, waa bogagga degitaankaaga. Bogagga degitaanku waa inay noqdaan meesha loo socdo - maahan meel CTA-yada kale iyo xulashooyinka kale. Raadinta bog boggaaga ah, bogaggaagu miyey ku dhisan yihiin wicitaanno adag oo wicitaanno ah oo toos ah, ku dhow, iyo guud ahaan goobta?
Weli ma aynaan dhammayn, laakiin waxaan ka kordhinnay tirada hoggaamiyeyaasheena ~ 5 bishii illaa iyo in ka badan 140 horseed bishii. Taasi waa horumar ka baxsan shaxanka! Iyo annaga oo aan beddelin mugga dadka booqanaya goobta. Goob isku mid ah, isla mawduuc ah… laakiin a 2,800% hagaajinta beddelaadda si fudud adoo hubinaya inay jiraan baaqyo-ficil oo ku saabsan qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha aan soo saarno. Kuwani maahan wejiga wajigaaga oo ka ifaya xayeysiis banner… kaliya waa badhano fudud, sawiro ama xitaa xiriir qoraal.
Helitaanka wicitaan-ku-ficil ka kooban mawduucaaga iyo goobta waa inay fududaan. Dhagaystayaashaadu maahan inay ka fekeraan waxa ay sameyn karaan xiga, hubi inaad u sheeg waxa xiga ee ay sameynayaan. Hadaad u sheegto way imaan doonaan.
Warbaahinta Bulshadu ma waxay innoo rogaysaa cilmi-nafsi?